Ekpere maka nne nwụrụ anwụ. ? Na Nwụrụ Anwụ | Mkpụmkpụ
Ekpere maka nne nwụrụ O nwere ike inyere anyị aka inweta nkasi obi anyị chọrọ n'oge dị oke egwu.
Ọnwụ nne bụ otu n’ime ihe mgbu kachasị njọ mmadụ nwere ike inwe n’ihi na ọ na-efunahụ onye nyere ya ndụ, onye duziri ya ma soro ya n’aga. Ọ bụ ihe nwute bụ ihe siri ike imeri, mana site na enyemaka nke mmụọ nke ekpere pụtara, ọ nwere ike ịme ngwa ngwa.
Nke a bụ ekpere dị mkpa nke, ọbụlagodi na anyị chere ma ọ bụ na anyị achọghị mgbe ọ bụla, eziokwu bụ na anyị amaghị oge anyị chere mkpa ikpe ekpere a.
Ọ bụ ya mere na acatolic okwukwe, enwere ahịrịokwu zuru oke ma zie ezie anyị nwere ike ịnabata ọnọdụ ọ bụla anyị na-aga.
1 Ekpere maka nne nwụrụ anwụ Gịnị ka ọ bụ?
2 1) Ekpere maka nne nwatakịrị nwụrụ
3 2) Ekpere maka nne nwuru
4 3) Ekpere diri nne m n’elu igwe
4.1 Kedu mgbe m ga-ekpe ekpere?
Ekpere maka nne nwụrụ anwụ Gịnị ka ọ bụ?
Ekpere a nwere otutu ebum n’uche, otu n’ime ha bu inwe ike ihu n’etiti ekpere, nkasi obi anyị chọrọ, ebumnuche ọzọ na ikekwe nke na-enweta ike dị ukwuu bụ inwe ike ibido nkwukọrịta na akụkụ ahụ, nke a na-enye anyị nchekwa na ịdị ụtọ na ịhụ n’anya dịka nne, nọ n’eluigwe, na-ezu ike n’udo ma nwekwa anụrị n ’uru nke inwe ezigbo ndụ n’ihu Chineke.
Ebumnuche ọzọ bụ inwe ike ịkele obi ụtọ nke inwe nne ma rịọ maka ezumike ebighi ebi. Nke a dị mkpa n’ihi na ọ bụ ụzọ anyị ga-esi nwee udo n’onwe anyị ịmara na ekpere anyị na-eme ka onye-otu ezi-na-ụlọ anyị chọta ìhè gafere ọnwụ.
1) Ekpere maka nne nwatakịrị nwụrụ
«Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, Ọkpara Chineke, onye chọrọ inwe nne n'ụwa, Nwa agbọghọ na -amaghị nwoke; jiri anya ọmịiko lee ohu gị N…, onye ị kpọrọ site n'obi ezinụlọ anyị.
Na site na ịrịọ nke Saint Mary nke Guadalupe, gọzie ịhụnanya nke anyị na-ahụkarị n'ụwa, ma hụ na site n'eluigwe ọ ga-aga n'ihu na-enyere anyị aka. Were nchebe obi ebere gị chebe ndị ahụ ọ hapụworo n’ụwa. Gi onye di ndu na achi ebeebe ebeebe.
Ọtụtụ mgbe, ekpere maka nne nwụrụ anwụ bụ ihe kachasị mma.
Anyị nwere ọtụtụ ụdị ekpere ugbu a, n'etiti ọtụtụ nhọrọ, bụ ahịrịokwu dị mkpirikpi dị mfe iburu gịnịkwa ka anyị ga - eme n’oge niile?
N’ọnọdụ nke owu ọmụma, oge ụfọdụ, anyị chọrọ ịnọnyere ma mefuo mmanụ iji cheta onye anyị hụrụ n’anya, n’oge ndị ahụ, ọ dị mkpa inwe ike ibuli otu n’ime ekpere ndị a anaghị achọ oge dị ukwuu mana nke ahụ nwere ike inyere anyị aka ịkwụsị mwute ma chọta udo na obi iru ala nke Chineke ga-enweta ga adi.
2) Ekpere maka nne nwuru
"Oh nne m, achọrọ m ikwu nke ahụ
Were bụ onye ndu na ugwu nke ndụ m,
Ekele dịrị gị na anyị nọ n’ụwa a,
daalụ onye nyere anyị ihe ahụ,
daalụ gị onye kụziiri anyị ihe,
Ekele diri anyi anyi bu ihe anyi bu,
I puru, ila n’eluigwe,
Lụzuru ọrụ gị na ndụ,
I nyere onye-ab theata-obi na ob theeye aka,
na-elebara ihe niile anya,
otu esi echefu ọtụtụ ihe mara mma, olu gị, ịchị ọchị gị ...
Taa Nna m, a na m arịọ gị
O jiri ịdị umeala n'obi gee m ntị
beaa ntị n'olu ekpere m,
Gosi m ụzọ m nye nne m
ka o we diyere gi Onye-nwe,
Were ya zuru ike n’alaeze nke elu-igwe.
Mama m, ifuru n’ili ya na-akpọnwụ
Anya mmiri na ebe nchekwa gi kpochapụrụ
Ekpere nye nkpuru-obi gi, Chineke na-anata ya.
Ka ìhè ya na-adịru mgbe niile, ọ ga-ezu ike n’udo.
Strong nwere mmasị na ekpere a siri ike maka nne nwụrụ?
Ndị nne bụ ihe ụtọ na thathụnanya nke ga-ahụ maka ọdịmma nke ụmụ ha mgbe niile. Ihe atụ nke nne atụ bụ nne nke Onye-nwe-anyị Jisọs Kraist, juputara na mmụọ nsọ onye maara etu esi hụ nwa ya nwoke n’anya ma nabata ya.
na Ndị nne bụ akụkụ dị mkpa nke osisi vaịn onye ọ bụla ma mgbe akụkụ a na Chineke okike eke hapụrụ idebe ihe na-ejupụtakarị site n’ekpere anyị na-ewelite na echiche na ya n’onwe ya na-esote Chineke na-elekọta ụmụ ya.
3) Ekpere diri nne m n’elu igwe
«O nna m, naanị nkasi obi na oge mgbu ebighi ebi.
Anyị na-eru újú gị na-anọghị, nne nne, n'oge a nke mwute,
Ọrịa na -egbu, ọtụtụ ahụhụ, ị ​​na-ahapụ oke efu n’ime obi anyị,
Nye ya Onye-nwe, mgbaghara nke mmehie gị, ka ọ gabiga n’ọnụ ụzọ ọnwụ,
Nweta ọkụ gị na udo ebighi ebi.
Chi nile, Anyị n'etinye aka gị n'anya. Nye nne anyi, onye akporo na ndua ka o soro gi bia. Nye ya izu ike nke mkpụrụ obi na paradaịs. Nne m, achọrọ m ikwu na ị bụ onye ndu na ugwu nke ike m,
Ekele diri anyi anyi n’uwa a, ekele diri gi onye nyere anyi ihe a,
Ekele diri unu ndi mutara anyi, ekele diri anyi anyi bu,
Ekele dịrị gị m ga-abụ ezigbo mmadụ ị hapụrụ, ịga eluigwe,
Lụzuru ozi gị n'ụwa, nyere ndị ọzọ na ndị nọ na mkpa aka,
Na-ege ntị mgbe niile na ịmara ihe niile, dị ka ileghara ọtụtụ ihe mara mma, olu gị, ịmụmụ ọnụ ọchị gị ...
Nna m ta, e ji m obi ume ala juo gi aju, nuru ekpere m
Lee ntị n'olu ekpere m, gosi m ụzọ m,
Benọ n'akụkụ gị Onyenwe anyị, Were ya zuru ike n’alaeze nke elu-igwe.
Mama m, ifuru n’ili ya akpọnwụọ, iyi na-echeta gị
Ekpere maka nkpuru obi gi, Chineke na-anata ya. Mee ka ndu ebighebi nara gi, ka izu ike zuo ike.
Anyi hụrụ nnem nwụrụ anwụ nke bi n’eluigwe n’anya nke ukwuu.
Nne bụ enyi ị nwere ike ịgakwuru n'oge ọ bụla, n'agbanyeghị ụmụ ọjọọ ị ghọrọ, ndị nne na-enwekarị ohere ịnabata ụmụ ha.
Mgbe ndị nne ndị a na-ezukọta n’eluigwe, ha ga na-ahụ n’anya ma na-adị njikere ịge anyị ntị, nyere anyị aka ma na-eduzi anyị.
Ka emechara anyi gha ighota na odighi ebe nne di nma kari inoro onye nwe otu Chineke Chineke.
Kedu mgbe m ga-ekpe ekpere?
Enwere ike ikpe ekpere n’oge niile.
Ọ bụchaghị na ọ dị mkpa ka ewelie olu ma ọ bụ kandụl, kama na anyị nwere ike jiri obi anyị niile kpee ekpere ma jiri obi anyị niile kpee ekpere. Na mgbakwunye, ihe ị ga --enwe bụ okwukwe dị ndụ ma lelee anya na ekpere anyi gaa ebe ha kwesiri igha.
Achị kandụl ahụ, ebe ahụ, ọ bụrụ na anyị na-eme ya dị ala, ma ọ bụ olu dị elu ma ọ bụ n'uche anyị, bụ naanị nkọwapụta nke anyị nwere ike ịhụ n'oge a, mana n'ọnọdụ ọ bụla enwere ike ikpe ekpere oge niile.
Kpee ekpere maka nne nwuru anwu na ihunanya di uku.